Miatrika Fotoana Fohy Ny Fitondràna Etiopiana Satria Mikarakara Ny Ho Avy ny Zanaka Ampielezana · Global Voices teny Malagasy
Miatrika Fotoana Fohy Ny Fitondràna Etiopiana Satria Mikarakara Ny Ho Avy ny Zanaka Ampielezana
Voadika ny 07 Novambra 2016 17:58 GMT
Valan-javaboahary Nasionaly Simien ao Etiopia. Sary afaka ampiasaina malalaka avy tamin'ny Pixabay
Ny volana Novambra 2015, nanao hetsi-panoherana ireo mponin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Ginchi, nanohitra ny soso-kevitry ny governemanta Etiopiana hanitàrana an'i Addis Abeba, renivohitra, ho any amin'ireo tany fambolena manodidina ao amin'ny faritr'i Oromia. Nitombo ho lasa hetsika fitakiana fizakantena bebe kokoa, fahalalahana ary fanajana ny maha-izy ny fokon'ny olona Oromo ireo hetsi-panoherana, foko izay niaina fanilikilihana foana ary fanenjehana tao anatin'ny ampahefatry ny taonjato farany.
Any Amhara, ny faritra faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, nanomboka tao Gonder ny 31 Jolay tamin'ity taona ity ireo fihetsiketsehana, ary vetivety dia nivadika nankamin'ny firesahana ny olana mombamomba ireo olona mipetraka ao amin'ny vondrom-piarahamonina Welkait ho lasa hetsika rezionaly nihitatra nankany amin'ireo faritany maro hafa, tao anatin'ny efa-bolana monja. Na nanamarika ny fifandirana lehibe voalohany teo amin'ireo mpitarika ny hetsi-panoherana Amhara sy ny governemanta Etiopiana aza ilay zava-nitranga lehibe ny 31 Jolay, afaka soritana hatry ny taloha efa tany amin'ny fanombohan'ny taona 1990 ny fifandirana teo amin'ireo Amharas sy ny fitondrana, tamin'ny namerenan'ny fitondrana teo ambany fahefan'ny Tigraiana namaritra ny faran'ny distrikan'ny vondrom-piarahamonina Welkait izay an'ny foko Amharas tao anatin'ny faritra Tigray. Ireo mpikatroka mafana fo Amhara sasany namaritra ilay hetsi-panoherana Amhara ho ‘fitroarana fahatezerana nandritra ny 25 taona’. Naneho teny faneva firaisankina amin'ireo hetsi-panoherana any Oromia ihany koa ireo mpanao hetsi-panoherana tany Gonder.
Na nanomboka noho ny antony samihafa aza ireo hetsi-panoherana any Oromia sy Amhara, samy nateraky ny politika sarotra ao Etiopia momba ny fihaviana izy roa ireo. Ao amin'ireo faritra roa ireo, manao fanamby amin'ny fanindriana ataon'ireo vato nasondrontry ny tany avy ao amin'ny vondrona iray — ny Tigray — amin'ny politika Etiopiana, ireo mpanao fihetsiketsehana. 6%-n'ireo mponina monja no Tigray fa kosa mibodo ireo toerana ambony ao amin'ny miaramila sy ny governemanta, raha toa ny Oromo 34% ary ny Amhara 27%-n'ny mponin'ny firenena.
Hatry ny volana Novambra, an-jatony ireo mpanao hetsi-panoherana novonoina ary an'arivony maro no voasambotra. Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, farafahakeliny, olona 52 no novonoina taminà fifamoriana tamin'ny fetin'ny Irreecha tao Oromia, taorian'ny nanakorontanan'ireo hery fiarovana tamin'ny fanipazana baomba entona ary bala tena izy.
Toa nampiseho teboka iray manandanja tamin'ny fiovàna'ilay hetsika naharitra taona iray ny fiparitahana mahagagan'ireo hetsi-panoherana avy tany Amhara ka hatrany Oromia, tamin'ny fihantsiana ny fitondràna 25 taonan'ny Mandatehezana Demokratika Revolisioneram-Bahoakan'i Etiopia (EPRDF), ny fivondronan-kery ara-politikan'ny eo amin'ny fitondràna, giazan'ireo Tigray mpitondra avy amin'ny foko vitsy an'isa.
Ho an'ireo mpitazana sy ireo mpitsikera, maneho fotoana fandraisana fanapahan-kevitra ireo hetsi-panoherana ireo, amin'ny tantara ara-politikan'i Etiopiana maoderina. Tany amin'ny tapaky ny volana Oktobra, voalohany tao anatin'ny 25 taona ny governemanta no nanambara vanim-potoana misahotaka mandritry ny volana enina.
Mbola nanohy nampanantena fanovàna ireo tomponandraiki-panjakana, taonga hatrany amin'ny antsoin'ireo mpitazana hoe “olona mpanohitra namana” sahala amin'i Lidetu Ayalew. Ny herinandro lasa teo anefa, nisy fisamborana faobe, ary notapahan’ireo manampahefana ny fifandraisana nomerika. Raha ny fampielezan-kevitry ny fanjakana sy ireo “fandaharanasa fanofanana” amin'ny lafiny maro sady tsy maintsy arahan'ireo mpiasam-panjakana dia toy ny mandefa marika hoe mitolona mafy ny governemanta mba hifehezana ireo hatezerana sy tsy hafaliana miparitaka be.
Mandritra izany, manamarika ilay fotoana manan-tantara amin'ny fanomezana voninahitra ireo niharan’ny herisetra no sady manao fiaretantory ireo mpikambana marobe miisa 251.000 ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Etiopiana any ampielezana izay miaina any Etazonia. Mbola zava-dehibe kokoa, nanomboka naminavina ny fiainana tsy misy ny fitondràna ankehitriny izy ireo.
Raha toa ireo hetsi-panoherana manimba tsikelikely ireo rafitra ara-politika sy ara-toekarena fototr'i Etiopia, hita ho vao mainka mangozohozo noho ny hatrizay ny fitondràna. Noho izany, nikarakara fivoriana ny Etiopiana any ampielezana mba hiresahana ny fanovàna fitondrana, fanavaozana lalàm-panorenana, ary ireo resaka tetezamita hafa. Nokarakarainà vondrona ara-politikan'ny zanaka ampielezana sy olon-tsotra maro ireo fivoriana, izay mizarazara ihany anefa arakaraky ny karazana fokon'ny firenena sy ireo foto-kevitra isankarazany.
Ao anatin'ireo hetsika miseho ankehitriny eo amin'ireo Etiopiana any ampielezana, misy fivoriana roa miavaka amin'ireo.
Fivoriana Oromo ho an'ny Marimaritra Iraisana Nasionaly, Londona, Royaumes Unis
Ny Fivoriana Oromo ho an'ny Marimaritra Iraisana Nasionaly dia fivoriana savaranonando izay nanapahan'ireo vondrona ara-politikan'ireo Oromos, ny hany vondrom-poko Etiopiana lehibe indrindra, ny mikasika ny Fifanarahana Fitantanana Oromo vinavinaina hatao amin'ity volana Novambra ity any Atlanta, Zeorzia.
Nanomboka tany Londona ny 22 Oktobra 2016 ny fivoriana savaranonando, ary tapitra ny andro nanaraka io. Raha mbola teo an-dàlany ny fivoriana, efa nisy fivakisana haingana sahady teo amin'ireo Oromo sangany ao anatin'ireo Etiopiana any ampielezana, mikasika ny fiaraha-mientan'ny rehetra sy ny rafitry ny fivoriana kasaina hatao any Atlanta. Hita ho manohana ny fizotry ny marimaritra araka ny efa voaomana ireo mpikarakara ny Atlanta, na teo aza ny tsikeran'ireo Oromo mpikatroka mafana fo malaza, mpanao gazety, ary akademisiana, izay namoaka fanontaniana manahirana sy nanolotra lohahevitra isankarazany ary rafitra mifampidimpiditra afaka hanoloana ilay marimaritra.
Tena tonga tamin'ny faran-tampony mampivarahontsana mihitsy anefa ny rivotra niainan'ilay fivoriana savaranonando, rehefa lasa vanja nandrehitra ny afo i Liben Wako (mpisolo tena ny vondrona ara-politikan'ny Oromo) tamin'ny nitenenany hoe, “Tsy ny hanao an'i Etiopia ho demokraty no adin'ireo Oromos fa hanamontsamontsana azy.”
Mahatsikaiky ny fananganan'ireo zanaka ampielezana sy fandrodanany an'i Etiopia, raha izahay aty an-toerana eo am-pisakafoana maraina, misotro kafe miaraka amin'ireo mpifanila vodirindrina ary mandeha miasa.
Fampisehoana mahatalanjona ny kirizy misy eo amin'ny firenena ilay fanambaràna, mampiseho fa mbola olana misy sy tsy voavaha ao Etiopia ankehitriny ny nasionalisma ara-poko. Ao amin'ny rivotra ara-politika ara-koltoraly sy foko ankehitriny, mety vao mainka hahasorena ny olona amin'ireo Etiopiana tsy Oromo nanohana ny hetsika natao izay nanana tanjona ny hametraka rafitra demokratika tao Etiopia ny karazana fanambaràna toy ireo.
Afaka tohanan'ny zanaka ampielezana ireo hetsika ara-politika any #Ethiopia, fa kosa tsy tokony didiany. Fantatry ny vahoaka ny tsara indrindra ho azy ireo.
Tondrozotra ho an'ny tetezamita sy Fametrahana ny Lalàmpanorenana ao Etiopia
Natao ny 22 sy 23 Oktobra 2016 io fivoriana io, nitondra niaraka ireo olon-tsotra sy vondrona ara-politika karazany maro tany Washington, D.C. Manamarika ny fanaovana fanindroany ny hetsika tamin'ity taona ity ilay hetsika ny volana Oktobra teo, ny fivoriana voalohany izay natao ny volana Aprily 2016.
Nampiseho taratasy, naoty ary hevitra mikasika ireo hetsi-panoherana miseho ankehitriny sy ireo vokany any Etiopia, ireo manam-pahaizana sy vondrona ara-politika mitoetra any ivelany. Araka ny tatitra, nahita marimaritra tamin'ny mombamomba iraisana amin'ny maha-Etiopiana ny ankamaroan'ireo mpandray anjara tao amin'ilay fivoriana, raha samy nanaiky ny fisiana sy ny mombamomba ireo foko maro karazana ihany koa. Mampiseho io fifanarahana io ny ankamaroan'ireo taratasy naseho tao amin'ny fivoriana.
Amin'ny ankapobeny, ireo vondrona roa mifanohitra ara-politika — nasionalista ara-poko sy ny nasionalista amin'ny maha-olom-pirenena — dia samy nibahan-toerana tamin'ny fandresena lahatra nifanaovana nandrafitra ireo fivoriana roa. Indraindray io tsy fitoviana io dia mahatonga fifandirana eo amin'ireo mpitaky fisarahana sy ireo mpandàla fampiraisana.